Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Qalabka Qolka Hawlgalka ee Shiinaha - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Cisbitaalka iyo Xarumaha Waadhka > Qalabka Qolka Shaqada
Qalabka qolka qalliinka waa aalad lagu bixiyo qalliin iyo samatabbixin bukaannada, waana qayb farsamo oo muhiim ah oo isbitaalka ah. Qolka qalliinka waa in lagu xidhaa qaybta qalliinka, laakiin sidoo kale leh bangiga dhiigga, qolka daryeelka, qolka kicinta suuxinta, iwm. Fiiro gaar ah u yeelo maareynta afar siyaabood oo caabuqa la jeexiyo, kuwaas oo kala ah: hawada qolka qalliinka; Maqaallada loo baahan yahay qaliinka; Faraha takhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha iyo maqaarka bukaanka si looga hortago caabuqa oo loo hubiyo heerka guusha ee qaliinka. Shuruudaha nakhshad macquul ah, qalab dhamaystiran, kalkaaliyayaal ayaa u shaqeeya xasaasi, degdeg ah, waxtarka shaqada qaarkood. Qolka qalliinka waa inuu lahaadaa xeerar adag oo macquul ah iyo xeerar iyo halbeegyada hawlgallada aseptic. Horumarinta degdega ah ee tiknoolajiyada qalliinka, qolka qalliinku wuxuu noqonayaa mid aad u casri ah.
Qalabka qolka qalliinka waxaa loo qaybin karaa shanta qaybood ee soo socda iyadoo loo eegayo heerka bakteeriyada ama dhalmada: Waxaa loo baahan yahay in la sharaxo waa: marka loo eego mawduucyada takhasuska ah ee kala duwan, qolka qalliinka waxaa loo qaybin karaa guud ahaan, lafaha, dhalmada iyo haweenka, qaliinka maskaxda, qaliinka wadnaha iyo wadnaha. , qaliin kaadida. Gubasho, ent iyo qolalka kale ee qalliinka. Maadaama qalabka iyo qalabka gaarka ah inta badan looga baahan yahay hawlgallada khaaska ah, qolka qalliinka ee hawlgallada khaaska ah waa inuu ahaadaa mid go'an.
Qalabka qolka lagu shaqeeyo sidoo kale way kala duwan yihiin, sariirta weyni waxay leedahay qaliin (si loo daboolo baahiyaha jagooyinka kala duwan), laambad aan hadh lahayn (loo baahan yahay) dhammaan noocyada qalliinka, wiishashka, isku dhafka dhammaan noocyada qalabka korantada ee qalabka, oo loo qaybiyo suuxdin, muraayad godad , qalliin, meel rakibo gaar ah sida xaaladdu noqon karto), laambad aan hadh lahayn, dusha wiishashka munaaradda ayaa lagu rakibi doonaa qolka qalliinka, Miiska qalliinka waa dhaqaaqi karo; Kuwa kale waxaa ka mid ah mashiinka suuxinta, hawo-mareenka, mindida koronto, kormeeraha iyo waxyaabo kale oo yaryar oo aad u tiro badan oo aan la xusin.
Qalabka Dheecaannada Dhaawaca
Qalabka Dheecaannada Dhaawaca: Tuubbada dheecaanku waa nooc ka mid ah qalabka caafimaadka ee dheecaanka qaliinka ee bukaan-socodka, haga malaxda, dhiigga iyo dareeraha ku urursan unugyada bini'aadamka ama daloolka jirka ee jirka dibadda, ka hortagga caabuqa qalliinka ka dib iyo kor u qaadida bogsashada dhaawaca. Waxaa jira noocyo badan oo tuubooyinka dheecaanka qaliinka ah ee codsiga kiliinikada, qaar waxaa loo isticmaalaa kateeterization, qaar waxaa loo isticmaalaa nabarka, daloolka laabta, godka maskaxda, mareenka caloosha iyo mindhicirka, mareenka biliary iyo wixii la mid ah. Dheecaannada qalliinka waa in lagu hago malaxda, dhiigga iyo dareeraha ku urursan unugga jirka ama daloolka jirka si looga hortago caabuqa qalliinka kaddib oo saameeya bogsashada nabarrada.
Nidaamka Laser Qalliinka
Nidaamka Laser-ka Qalliinka: Nidaamka daawaynta Laser waa nooc ka mid ah daawaynta ka faa'iidaysata kulaylka laysarka unugyada noolaha, waxaana lagu gartaa goob qalliin oo cad iyo tayada qalliin oo sarreeya.
Gaariga Bukaan-socodka: Gaariga gargaarka koowaad waa qalab caafimaad oo loogu talagalay gelitaanka joogtada ah iyo xaaladaha degdegga ah, baaritaannada, ogaanshaha raajada iyo daawaynta hore, iyo sidoo kale in bukaannada loo kala wareejiyo waaxaha, waadhka iyo qolalka qalliinka.
Qalliinka Lamp: Dhab ahaantii, nuxurka nalka qalliinku wuu ka duwan yahay nalka caadiga ah si loo buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee qalliinka. 1, shuruudaha iftiinka qolka qalliinka, 2, nalka qalliin badbaado leh, 3, shuruudo hadh ma jiro, 4, Shuruudaha iftiinka qabow, 5, shuruudaha jeermiska dila. Nalalka hawlgalka waxaa ka mid ah nalka hawlgalka ee milicsiga udhaxeeya iyo nalka hawlgalka nooca dalool laba taxane, nalka hawlgalka milicsiga iyo laambad waalidka molecular iyo laambad keliya; Nooca daloolka ee nalka ku shaqeeya waxa kale oo loo qaybiyaa laambad xaraf ah iyo laambad keliya oo laba tilmaamo ah.
Laambada Imtixaanka LED-ka ee Qalliinka
Qalliinka Ilayska Baadhitaanka: Dhab ahaantii, nuxurka nalka qalliinku wuu ka duwan yahay nalka caadiga ah si loo buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee qalliinka. 1, shuruudaha iftiinka qolka qalliinka, 2, nalka qalliin badbaado leh, 3, shuruudo hadh ma jiro, 4, Shuruudaha iftiinka qabow, 5, shuruudaha jeermiska dila. Nalalka hawlgalka waxaa ka mid ah nalka hawlgalka ee milicsiga udhaxeeya iyo nalka hawlgalka nooca dalool laba taxane, nalka hawlgalka milicsiga iyo laambad waalidka molecular iyo laambad keliya; Nooca daloolka ee nalka ku shaqeeya waxa kale oo loo qaybiyaa laambad xaraf ah iyo laambad keliya oo laba tilmaamo ah.
Iftiinka Imtixaanka Caafimaadka ee Led Mobile
Iftiinka Baadhitaanka Caafimaadka ee Led Mobile: Dhab ahaantii, nuxurka nalka qalliinku wuu ka duwan yahay nalka caadiga ah si loo buuxiyo shuruudaha gaarka ah ee qalliinka. 1, shuruudaha iftiinka qolka qalliinka, 2, nalka qalliin badbaado leh, 3, shuruudo hadh ma jiro, 4, Shuruudaha iftiinka qabow, 5, shuruudaha jeermiska dila. Nalalka hawlgalka waxaa ka mid ah nalka hawlgalka ee milicsiga udhaxeeya iyo nalka hawlgalka nooca dalool laba taxane, nalka hawlgalka milicsiga iyo laambad waalidka molecular iyo laambad keliya; Nooca daloolka ee nalka ku shaqeeya waxa kale oo loo qaybiyaa laambad xaraf ah iyo laambad keliya oo laba tilmaamo ah.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Qalabka Qolka Shaqada oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Qalabka Qolka Shaqada soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Qalabka Qolka Shaqada la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.